သတင်း - ကြက်လှောင်အိမ်တွင် မည်သို့သော အနုတ်လက္ခဏာဖိအားပန်ကာကို အသုံးပြုမည်နည်း။
1. လေဝင်လေထွက်နှင့် လေဝင်လေထွက်အတွက် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ပန်ကာကို အသုံးပြုသည်- အလုပ်ရုံပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ပေါက်ကို ရွေးချယ်ပါ၊ ထူးခြားသောဓာတ်ငွေ့ကို ထုတ်ယူရန်အတွက် လေကို စွန့်ထုတ်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် အနုတ်လက္ခဏာဖိအားပန်ကာကို စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုသည်။
2. စိုစွတ်သော ကန့်လန့်ကာဖြင့် အနှုတ်ဖိအား ပန်ကာကို အသုံးပြုခြင်း- ပူပြင်းသော နွေရာသီတွင် အလုပ်ရုံကို အအေးခံရန် အသုံးပြုသည်၊ သင့်အလုပ်ရုံသည် မည်မျှပူနေပါစေ၊ စိုစွတ်သော ကန့်လန့်ကာ-အနုတ်လက္ခဏာ ဖိအားပန်ကာစနစ်သည် သင့်အလုပ်ရုံ၏ အပူချိန်ကို 30C ခန့်အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ စိုထိုင်းဆ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှိပါသည်။
A. အနုတ်လက္ခဏာဖိအားပန်ကာသည် အပူချိန်မြင့်မားသော သို့မဟုတ် ထူးခြားသောအနံ့ရှိသော အလုပ်ရုံများအတွက် သင့်လျော်သည်- ဥပမာ- အပူကုသစက်ရုံများ၊ သတ္တုပုံသွင်းစက်ရုံများ၊ ပလပ်စတစ်စက်ရုံများ၊ အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းစက်ရုံများ၊ ဖိနပ်စက်ရုံများ၊ သားရေပစ္စည်းစက်ရုံများ၊ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်စက်ရုံများ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဆိုးခြင်းစက်ရုံများနှင့် အမျိုးမျိုးသော၊ ဓာတုအပင်များ။
B. အနုတ်လက္ခဏာဖိအားပန်ကာသည် အထည်ချုပ်စက်ရုံများ၊ အမျိုးမျိုးသော တပ်ဆင်အလုပ်ရုံများနှင့် အင်တာနက်ကဖေးများကဲ့သို့သော လုပ်သားအင်အားများသော လုပ်ငန်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။
C. အနှုတ်ဖိအားပန်ကာသည် စိုက်ခင်းဖန်လုံအိမ်များ၏ လေဝင်လေထွက်နှင့် အအေးခံရန်နှင့် မွေးမြူရေးခြံများ၏ အအေးခံရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
D. အနှုတ်ဖိအားပန်ကာသည် အအေးခံရန် လိုအပ်သော်လည်း အချို့သော စိုထိုင်းဆပမာဏ လိုအပ်သည့်နေရာများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ချည်စက်များ၊ သိုးမွှေးစက်များ၊ ပိတ်စက်များ၊ ရက်ကန်းစက်များ၊ ဓာတုဖိုက်ဘာစက်များ၊ ချည်ထိုးစက်များ၊ ချည်ထည်စက်များ၊ ချည်ထိုးစက်များ၊ ပိုးထည်ယက်စက်များ၊ ခြေအိတ်စက်များနှင့် အခြားအထည်အလိပ်ကြိတ်စက်များ ကဲ့သို့သော ချည်စက်များ၊
E. အနှုတ်ဖိအားပန်ကာသည် သိုလှောင်ရုံနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်အတွက် သင့်လျော်သည်။
4. အနှုတ်ဖိအားပန်ကာကို အိတ်ဇောပန်ကာအဖြစ် အသုံးပြုသည်- ယေဘူယျ အိတ်ဇောပန်ကာ (အများအားဖြင့် Yanggu ပန်ကာ) သည် စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းပြီး အိတ်ဇောပန်ကာတစ်ခုသည် လူအနည်းငယ်ကို လေမှုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ မြေပြင်တွင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ လေထဲတွင်ချိတ်ဆွဲထားသော အနှုတ်ဖိအားပန်ကာသည် မဟုတ်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် 1,000 စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသော အလုပ်ရုံတွင် ယူနစ် (၄)လုံးကို အသုံးပြုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အိမ်သည် လေပြင်းများ ပြည့်နေပါသည်။